Home News Koronto ku Dishay 4-Ruux Magaalada Muqdisho Xili Roobab Xoogan...
Koronto ku Dishay 4-Ruux Magaalada Muqdisho Xili Roobab Xoogan Da’ayaan
Inta la xaqiijiyay Afar ruux ayaa koronto ku dishay degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir, xilli roob xoog leh uu ka da’ay Magaalada Muqdisho.
Saddex ruux ayaa ku dhintay nawaaxiga Xaafadda Xaaji Baasto ee Degmada Hodan, dadkaan dhamaantood Koronto ayaa Sababtay geeridooda sidda ay Risaala u xaqiijiyeen dadka degaanka.
Waxaa sidoo kale jira wiil dhalinyaro ah oo asna ku dhintay degmada Waabari ee Muqdisho,ka dib markii ay Koronto qabatay.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in sidoo kale ay jiraan dad kale oo Koronto ay ku qabatay Degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir, laakiin gurmad ay heleen, kadib iyaga oo garaab ah halkaasi laga qaaday.
Roobab xoog leh oo Saacadihii lasoo dhaafay ka da’ay magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya ayaa saamayn ku yeeshay isu socodka dadka iyo gaadiidka, iyadoo wadooyinka waaweyn iyo kuwa xaafaddaha ay biyo fariisteen.
Dhawaan ayay aheyd Markii labo wiil oo dhalinyaro ah ay Koronto ku dishay degmada Wartanabadda ka dib markii ,iyaga oo maraya meel Luuq ay koronto kusoo dhacday.